IGAD oo walaac ka Qabta Rabshadaha lagu Beegsanayo dadka Qaxootiga ah ee Koonfur Afrika – Radio Daljir
IGAD oo walaac ka Qabta Rabshadaha lagu Beegsanayo dadka Qaxootiga ah ee Koonfur Afrika
Abriil 19, 2015 10:25 b 0
Axad, Abriil 19, 2015 (Daljir) — Xoghayaha guud ee urur-goboleedka dalalka Bariga Afrika ee IGAD, Maxbuub Macallin ayaa sheegay in IGAD ay walaac xooggan ka muujisay dilalka iyo weerarrada isir-nacaybka ee lagu beegsanayo dadka Afrikaanka ah ee ku nool Koonfur Afrika, kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafayay ka dhacayay gobollo ka tirsan dalkaas.
Maxbuub Macallin ayaa sheegay in weerarradaas ay soo jiiteen warbaahinta; ayna nasiib-darro weyn tahay, isagoo hoggaamiyeyaasha Koonfur Afrika ugu baaqay inay si deg-deg ah wax uga qabtaan dhibaatooyinka lagu hayo dadka Afirkaanka ah ee dalkooda ku nool.
“Weerarrada ka socda Koonfur Afrika waxay saameynta ugu weyn ku yeeshaan dadka ka soo jeeda dalalka ku bahoobay urur-goboleedka IGAD; waxaana ku baaqaynaa in si dhaqso ah wax looga qabto,” ayuu Maxbuub ku sheegay hadal uu warbaahinta ku siiyay magaalada Washington oo uu safar shaqo ku joogo.
Sidoo kale, xoghayaha guud ee IGAD ayaa sheegay in inkastoo hoggaanka Koonfur Afrika ay cambaareeyeen dhibaatooyinka lagu hayo Afrikaanka ku nool dalkooda, haddana looga baahan yahay inay rabshadahaan wax uga qabtaan sharciga dalkaas u yaalla.
“Xukuumadda Koonfur Afrika waxaa looga baahan yahay inay gobollada ay dhibaatadu ka jirto iyo dadka ka dambeeya intaba u adeegsato inay wax uga qabto sharciga waddankeeda u yaalla. Sidoo kalena la difaaco Afrikaanka oo dhan gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalalka Bariga Afrika oo si toos ah loo beegsanayo,” ayuu hadalkiisa ku daray Maxbuub Macallin.
Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma oo kasoo jeeda dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in dhibaatooyinka ka taagan dalkeeda ay yihiin kuwo aan la daawan karin, waxayna ugu baaqday hoggaamiyaha dalkaas inuu xalliyo mushkiladaha dalkaas ka jira.
Ugu dambeyn, xoghayaha guud ee IGAD ayaa hadalkiisa kusoo xiray in Koonfur Afrika ay tusaale u tahay Qaaradda Afrika oo dhan, loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyo badan looga wada-shaqeeyo sidii dhibaatada jirta loo xakameyn lahaa loona ilaalin lahaa qoxootiga dalkaas ku nool.
Tiro ka mid Shaqaalaha Qaramada Midoobay ee Puntland oo Maanta lagu Dilay Weerar Qarax
Xerada Jaziira oo Maanta Tababar loogu soo Xiray Saraakiil ka tirsan Dowladda Somaliya